Nôa - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Nôe)
I Nôa na Nôe dia ilay lehilahy voalaza ao amin' ny Baiboly fa sisa tsy maty niaraka tamin' ny ankohonany, tamin' ny safodrano teto an-tany nataon' Andriamanitra handringanana ny olombelona izay nanota tamin' ny fomba mihoampampana.
Ny tantaran' i Nôa dia hita ao amin' ny Baiboly sy ny Kor'any nefa misy fahasamihafany ny fomba fitantaran' ny boky tsirairay.
1 Tantaran' i Nôa araka ny Baiboly
1.1 Ny safodrano
1.2 Ny fanozonana an' i Hama
2 Tantaran' i Nôa araka ny Kor'any
Tantaran' i Nôa araka ny Baiboly[hanova | hanova ny fango]
Ny safodrano[hanova | hanova ny fango]
Ny Sambofiaran'i Noa, nataon'i Edward Hicks, taona 1846.
Araka ny Bokin' ny Genesisy ao amin' ny Baiboly dia nanamboatra sambofiara izay nitondra azy mianakavy sy ireo biby nasain' Andriamanitra nentiny i Nôa ka ireo no nitaranaka nameno ny tany indray taorian' ny safodrano. I Nôa no razamben' ny olombelona rehetra tamin' ny alalan' ireo vinantovaviny sy ireo zanany telolahy dia i Sema sy i Hama (na Kama) ary i Jafeta.
Ny fanozonana an' i Hama[hanova | hanova ny fango]
Ny fahamamoan'i Noa
Indray andro dia mamon-divay i Nôa ka hitan' i Hama ny fitanjahany nefa tsy nanao afa-tsy ny nilaza izany tamin' ireo rahalahiny izy ka ireto no nampitafy an-drain' izy ireo. Rehefa nisava ny hamamoan' i Nôa dia nanozona izy ka nanambara fa ho andevon' i Sema sy i Jafeta i Kanaana zanak' i Hama.
Tantaran' i Nôa araka ny Kor'any[hanova | hanova ny fango]
Ao amin' ny finoana silamo dia atao amin' ny teny arabo hoe نوح / Nûh i Nôa sady isan' ny mpaminany nataon' Andriamanitra ho irany tety ambonin' ny tany tamin' ny alalan' ny fanambaràna (ar.: Risala "iraka", "mpitondra hafatra"). Ny toko faha-71 ao amin' ny Kor'any dia mitondra ny anarany sady itantarana ny toriteny izay nataony tamin' ireo mpiara-belona taminy mba hanaiky ny didin' Andriamanitra tokana. Nitory ny tenin' Andriamanitra ilay Tokana tamin' ireo mpanompo sampy izy (Kor'any 71.23). Ao amin' io sorata io dia voatanisa ny anaran' ireo andriamanitry ny mpanompo sampy nivavahan' ny vahoakany, dia i Oda (ar.: Wudd), i Soa (ar.: Souwa'â), i Iagota (ar.: Yaghuth), i Iaoka (ar.: Ya'â'uq) ary i Nasra (ar.: Nasr).
Ny firesahana momba an' i Nôa ao amin' ny Kor'any dia misy fahasamihafana amin' izay hita ao amin' ny Baiboly. Tsy voatonona anarana sady tsy fantatra isa ireo zanaka lahin' i Nôa.
Nitory teny nandritra ny 950 taona teo anivon' ny vahoakany tamim-paharetana i Nôa (Kor'any 29.14) nefa olona vitsy no nanaraka azy ka ny ankamaroan' ireo dia olona mahantra. Nilaza taminy i Allah fa tsy hisy olona hafa intsony hanaraka azy. Ny ankamaroan' ny olona izay mpanompo sampy sy andriamanitra maro dia nihevitra azy ho mpandainga (Kor'any 11.36).
Nanamboatra ny sambofiara (ar.: fulk) i Nôa araka ny baiko sy ny toromarika nomen' Andriamanitra (Kor'any 11.38-40) nefa ireo lehiben' ny tanàna dia nihomehy azy. Noho izany dia nampandevezin' Andriamanitra ny lafaoro ka niondrana tao amin' ilay sambofiara i Nôa sy ny mpivady amin' ny zavatra rehetra sy ny ankohonany, afa-tsy ilay zanany voaozona, ary mpino vitsivitsy. Tsy fianakaviana akaikin' i Nôa avokoa ireo olona tafiditra tao amin' ny sambofiara fa ny olona rehetra mino an' Andriamanitra (Kor'any 11.40).
Nisy tamin' ireo havany izay maty tao amin' ny safodrano. Tsy nanaraka azy ny vadiny (sahala amin' ny vadin' i Lôta nandritra ny fandravan' Andriamanitra an' i Sôdôma sy Gômôra) (Kor'any 6.10). Ny iray tamin' ireo zanaka lahin' i Nôa dia tsy nety niondrana tamin' ny sambofiara fa nitady fialofana teny amin' ny tendrombohitra nefa natelin' ny rano satria tsy zanany ara-panahy izy fa naman' ireo izay nandà an' Andriamanitra (Kor'any 11.44-46).
Teo amin' ny Tendrombohitra Jōdȳ (ar.: جبل جودي / Jebel Ǧūdī), izay mety ho teo amin' ny tangoron-tendrombohitra Ararata no nipetrahan' ilay sambofiara tamin' ny farany. Miresaka ny amin' ny onjan-drano lehibe toy ny tendrombohitra ny Kor'any (Kor'any 69.11-12).
Ny tantara momba ny fahamamoan' i Nôa dia tsy hita ao amin' ny Kor'any ary inoan' ny mpino silamo fa voaaron' Andriamanitra amin' ny fahamamoana izy.
Sambofiaran' i Nôa
Apôkalipsin' i Nôa
Lalàna fiton' i Nôa
↑ Ny Baiboly dia miresaka ny amin'ny safodrano fa ny Kor'any kosa dia tsy mitantara afa'tsy ny amin'ny tondradrano.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Nôa&oldid=1039169"
Voaova farany tamin'ny 21 Oktobra 2021 amin'ny 11:13 ity pejy ity.